पाँच श्रीमतीहरूले लगातार बलात्कार गरेपछि श्रीमानको मृत्यु ! - Khabar Time
पाँच श्रीमतीहरूले लगातार बलात्कार गरेपछि श्रीमानको मृत्यु !
in अन्तर्राष्ट्रिय, रोचक
अफ्रिका । श्रीमानले श्रीमतीको यौन शोषण गरेको, या हातपात गरेको समाचार अक्सर सुन्न सकिन्छ । तर अफ्रिकी देश नाइजेरियामा भने बिल्कुलै फरक घटना घटेको छ ।
ती व्यापारीले क्रमैसँग यौन सम्पर्क राख्ने क्रममा पाँचौं श्रीमतीको पालामा उनलाई हृदयाघात भएको र उनको ज्यान गएको बताइएको छ । ओनोजाकी छैठौं पत्नीले प्रहरीलाई बताए अनुसार उनकी पाँचै श्रीमतीहरू उनको ज्यान गएपछि जङ्गलतिर भागेका थिए । गाउँका मुखिया ओकेप ओदोहका अनुसार उक्त घटनाको जानकारी तत्काल प्रहरीलाई दिइएको र निजकी पाँचै श्रीमतीहरूलाई गिरफ्तार गरिसकिएको छ ।
आगोले जलेकि ११ बर्षिया आरतीकाे चिन्ताजनक अवस्थामा